février 2020 – Page 2 – Trinitera Malagasy
Alarobia faha-enina mandavantaona
18 février 2020 Njara Pascal
Tsy ankasa Boky Jenezy 8, 6-13.20-22/Salamo 115/ Ankasa Jakôba 1, 19-27/Salamo 14/ Md Marka 1, 22-26 Niverina tany amin’ny tanin’ny Mpanjono (Betsaida) indray i Jesoa sy ny Mpianany. Araka an’i Lioka (Lk 9, 10) dia tao no nizaran’i Jesoa ny Mofo ho an’ny olona dimy arivo, ho an’i Marka kosa, tany no nanirahan’i Jesoa ny Mpianatra…
16 février 2020 Njara Pascal
Tsy ankasa Jenezy 4, 1-15.25/Salamo 49/ Ankasa Jakôba 1, 1-11/Salamo 118/ Md Marka 8, 11-13 Dia nanatona an’i Jesoa ny Farisianina. Mampametra-panontaniana hoe avy aiza no nipoiran’izy ireo, satria any Dalmanotà i Jesoa no niondrana niaraka tamin’ny Mpianany (raha adika ara-bakiteny Δαλμανουθά dia mety hanome hoe: tanin’ny mosarena). Tian’i Marka holazaina amintsika fa ao amintsika ao, dia misy…
14 février 2020 Njara Pascal
Tsy ankasa Jenezy 3, 9-24/Salamo 89/ Ankasa 1 Mpanjaka 12, 26-32; 13, 33-34/Salamo 105/ Md Marka 8, 1-10 Samy manana ny fiezahany hanome ny heviny momba ity “fampitomboana” mofo faharoa ity moa ny mpandalina Baiboly. Ao amin’ny toko faha-enina dia olona dimy arivo no vokin’ny mofo dimy tany an-tany efitra ary nanana amby 12 sobika. Eto…
Alakamisy faha-dimy mandavantaona
12 février 2020 Njara Pascal
Tsy ankasa Jenezy 2,18-25/Salamo 127/ Ankasa 1 Mpanjaka 11, 4-13/Salamo 105/ Md Marka 7, 24-30 Dia tonga tamin’ny tanin’i Tira sy Sidona i Jesoa, tanin’ny tsy mpino araka ny toe-tsaina Jody tamin’izany, ary indro niankohoka teo amin’ny tongony ity ramatoa iray grika (Jentily ho an’ny Jody). Naheno ny momba an’i Jesoa izy ka nino ary nitsaoka…
11 février 2020 Njara Pascal
Tsy ankasa Jenezy 2, 4b-9.15-17/Salamo 103/ Ankasa 1 Mpanjaka 10, 1-10/Salamo 36/ Md Marka 7, 14-23 Tsy ny fitandremana ny lalana aty ivelany no hitsarana ny mampadio na tsia ny zavatra izay fa noho izy manampy ny olona hivoatra na tsia. Tsy misy sakafo maloto ka tokony hofadiana raha tsy mifanohitra amin’ny fahasalaman’ny olona. Nanahirana ny…